त्रिअविमा खतराः क्याफे शिलबन्दी सदाका लागि कि देखाउन मात्र ? | Citizen Post News
त्रिअविमा खतराः क्याफे शिलबन्दी सदाका लागि कि देखाउन मात्र ?
२०७५ चैत्र २८ गते १७:०५
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिआइपी सेवा-सुविधा लिँदै आएका विदेशी मुद्रा तस्कर सुवास श्रेष्ठले सेटिङमै तस्करी गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । विमानस्थलमा आउने वित्तिकै प्रहरी, भन्सार, अध्यागमन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नागरिक उड्डयनका हाकिमलाई आफ्नो प्रभाव देखाई सेटिङमा अवैध काम गराउँदै आएका श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीका स्वच्छ केही अधिकृतहरुलाई खरिद गर्न नसक्दा उनी फन्दामा परेका थिए ।
त्रिअविको स्टेराइल जोन अर्थात सुरक्षा जाँच पुरा गरेपछिको क्षेत्रमा सञ्चालित उनको क्याफे समेत सरकारले त्रिअविको सुरक्षा खतरा विश्लेषण गर्दै शिलबन्दी गरिसकेको छ । उनको क्याफेलाई मंगलबार शिलबन्दी गरिएता पनि उनलाई बचाउन अनेक प्रचञ्च भइरहेका छन् । यद्यपि विमानस्थल सुरक्षा समितिको आकस्मीक बैठकले श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको क्याफेलाई शिलबन्दी गरेको थियो । समितिले भने सम्झौता बिपरित गैरकानूनी कार्य भएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । तर उनले क्याफे सञ्चालन गरेको ठाउँ सुरक्षा दृष्टिकोणबाट निकै खतरापूर्ण भएको सुरक्षा अधिकारीहरुको दावी छ ।
उक्त कफी स्टल एण्ड स्न्याक बार स्टेराइल जोनमा सञ्चालित थियो। निकै संवेदनशिल क्षेत्रमा रहेको उक्त क्याफेको शिलबन्दी सदाका लागि कि देखाउनका लागि मात्र ? गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । किनकी अवैध मुद्राको कारोबारी श्रेष्ठ र उनका कामदारले विमानस्थलले उपलब्ध गराएको पासको दुरुपयोग गर्दै तस्करी गर्दै आएका थिए भने उनीहरुले सुन तस्करहरुलाई समेत सहयोग गर्दै आएको विमानस्थल स्रोतले बतायो ।
त्रिअवि प्रवेश पासको दुरुपयोग गरेर उनी र उनको समूह बिना रोकतोक स्टेराइल जोनसम्म आउने जाने गरिरहेको थियो । विमान चढनु अघि यात्रुको सुविधाका लागि भन्दै प्राधिकरणले श्रेष्ठलाई क्याफे सञ्चालन गर्न गरेको सम्झौंता नै तृटिपूर्ण देखिन्छ । जुन ठेक्का पाउनका लागि उनले लाखौं होइन, करोडौं खर्चेको स्रोतको भनाई छ ।
‘क्याफे’ का कारण सुरक्षा खतरा
त्रिअविको अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ मोटरसाइकल पार्किङ स्थलसँगै कान्तिपुर क्याफे सञ्चालन गर्दै आएका श्रेष्ठलाई अहिलेसम्म कसैले पक्राउ गर्न सकेको थिएन । विगत लामो समयदेखि उनले त्रिअविको बाहिर र भित्र रहेको क्याफेबाट डलर तस्करीको अवैध धन्दा चलाउँदै आएका थिए । श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको कफी सप नै अवैध ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको थियो । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट विश्वभर सुरक्षा चेकजाँच पार गरेपछिको क्षेत्रमा कही पनि कफी सप हुन्न ।
तर उनले विगत लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको कफी सप त्रिअविको सुरक्षा चेकजाँच पार गरिसकेपछिको क्षेत्रमा अर्थात स्टेराइल जोनमा थियो । उनले कफी र ड्राई फुड विक्री गर्नका लागि उक्त ठाउँको इजाजत लिएता पनि उनले कफी सपबाट प्याकिङ फुडको पनि विक्री गर्दै आएका थिए । बाहिर रेष्टुरेन्टबाट प्याकिङ फुड भित्र लैजाने नाममा र भित्रबाट सामान बाहिर ल्याउने नाममा उनले अवैध काम गरिरहेका थिए ।
पक्राउ परेका श्रेष्ठले प्याकिङ फुडमा अध्याधुनिक हतियार त्रिअवि भित्र पठाए भने त्यसको जवाफदेही को हुने ? हतियारधारी समूहले उनीमार्फत भोली कुनै पनि विमान अपहरण गर्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? यतिखेर गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । किनकी प्रवेश पास भएका एयरपोर्ट कर्मचारीमाथि कुनै पनि चेकजाँच हुने गरेको छैन । सुवासले गत शुक्रबार पनि त्यही ‘ट्रिक’ लगाएर अवैध डलर विदेश लैजान खोजेका थिए ।